Compostable Bhegi Fekitori | China Yakagadziriswa Bhegi Vagadziri, Vatengesi
Yedu marara mabhegi akagadzirwa kubva kune zvakasikwa zvinhu uye ari 100% compostable uye biodegradable. Iyo biodegradability uye compostability yakave yakasimbiswa nemasangano epasi rese anovimbika. Zvinhu zvedu zvinodzikisira zvachose mumwedzi yakati wandei mumamiriro ekumaindasitiri.
Yedu bubble mabhegi ndiyo sarudzo yakanyanya kusarudzika yezvinhu zvisina kusimba kana zvakakosha zvemunhu nekutengesa. Pane zviitiko zvakasiyana siyana zvekushandisa, sekutumira zvinhu zvakakosha zvakadai sefoni, kurongedza zvigadzirwa zvisina kusimba semagirazi. Zvakare, inogona kushandiswa kuchengetedza zvinhu zvakakosha, nekuti haina mvura uye inodonhedza humbowo. Mabhegi ebhudzi ane yakakwenenzverwa nemisodzi uye haaremi, nokudaro hapana mubvunzo kuti vanogona kuchengeta zvigadzirwa zvako zvakanaka uye zvakachengeteka vachichengetedza mutengo wekutumira.
Mabhegi edu etsamba akasimba uye haasi nyore kubvaruka. Ivo vakasununguka kubata uye vanogona kushandiswa kutumira zvinhu zvakasiyana. Pamusoro pekushandisa kwekuendesa, ivo vanogona zvakare kubatsira muzvitoro, kumba kana mune dzimwe nguva. Haisi chete chigadzirwa chakakura kune ese ekutengeserana uye ega mashandisiro, asi zvakare ane hushamwari kune zvakatipoteredza sezvo iri 100% inogadzikana uye inogona kuora.